shinra_04's Reading List - shinra_04 - Wattpad
shinra_04's Reading List
ပုလဲတို့ဖြင့်ဖွဲ့သီသော ( Completed)
104K 14.3K 84
"ကံ့ကော်ဆိုတာ မပြောင်းလဲတဲ့ချစ်ခြင်း သက်သေ" အပြင်လောကထဲမှာ LGBT တွေရဲ့ဘဝက တကယ် မလွယ်ကူပါဘူး ။ ရှင်သန်ရတာ ၊ နေထိုင်ရတာ ၊ ဖြတ်သန်းရတာ က အစ အကုန်လုံး အခက်အခဲတွေ များပါတယ် ။ 2000 ခုနှစ် ဝန်းကျင်မှာဆိုရင် အခြေအနေတွေက ပိုခက်ခဲခဲ့တာပေါ့ ။ ဒီ fic လေးဟာ အထွန်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်း ။ မြို့ထဲက သူဌေးသား‌လေး တစ်ယ...
"မောင့်ရဲ့ဗီဇ သို့မဟုတ် ဘေးအိမ်က ကောင်လေး"(COMPLETED)
1.3M 196K 60
"ကျွန်တော့်ဘဝထဲကို ခေါင်းစဉ်မရှိဘဲ ရောက်လာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘေးအိမ်ကကောင်လေးလို့ တီးတိုးအမည်ပေးခဲ့မိတာပေါ့.." ~မောင်~ "ကၽြန္ေတာ့္ဘဝထဲကို ေခါင္းစၪ္မရွိဘဲ ေရာက္လာတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဘးအိမ္ကေကာင္ေလးလို႕ တီးတိုးအမၫ္ေပးခဲ့မိတာေပါ့.." ~ေမာင္~
336K 36.1K 36
730K 138K 141
မူရင်းစာရေးသူ : ရှီရှန် အမျိုးအစား : school life,Romance,comedy,Yaoi ဤဘာသာပြန်သည် အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ပါ။မူပိုင်ခွင့်အားလုံးသည်မူရင်းစာရေးသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
❣ချစ်သော ဦး ❣ S 1 ( Completed )
799K 62.1K 47
အသက်တမျှချစ်ပါသော်လည်း ထုတ်ဖော်မပြတတ် ရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့အချစ်က ချစ်ရသူကို နာကျင်မှုတွေသာ ပေးသလိုဖြစ်နေတတ်သည်။ အသက္တမ်ွခ်စ္ပါေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္မျပတတ္ ရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့အခ်စ္က ခ်စ္ရသူကို နာက်င္မႈေတြသာ ေပးသလိုျဖစ္ေနတတ္သည္။
There isaghost in my house! ( သူ ) (Z+U)
836K 18.6K 8
Another title : my boyfriend isaghost! စြဲလမ္းမႈ့တစ္ခုေၾကာင့္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ တိုင္ေအာင္ သရဲဘဝနဲ႔ ေစာင့္စားေနခဲ့ေသာ ေစာ္ဘြားေလး နဲ႔ ထိုအိမ္ကို ေျပာင္းလာေသာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
551K 114K 72
Original author - Sweet And Greasy Millet Porridge English title - After Being Transported intoaBook,I Adopted the Villain Original publisher - jjwxc Type - Web Novel This story is not mine. I just translated it. All credits go to original author and English t...
ဦး ကို ခ်စ္ မိ ေန ၿပီ | ဦး ကို ချစ် မိ နေ ပြီ | (Completed)
900K 81.8K 46
အသက္၃၀ေက်ာ္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဖခင္ရဲ႕စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ျဖစ္လာတဲ့ CEO ဦးဟန္ရဲဆက္ေမာ္ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက မိဘေတြရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ နာခံအသားက်ေနၿပီျဖစ္တဲ့ သားလိမၼာပိုးဟပ္ျဖဴေလး လႊားဝံ့ထည္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ။
458K 112K 76
This novel is not written by me.I just translated it from Chinese(mtl)to Myanmar.All the credits go to original author and publishers. Title- The Disabled Tyrant's Pet Palm Fish[Transmigration] Type- Web Novel Author- Fat Snow Mountain Fox (雪山肥狐) Associated Name- 残疾暴君的掌心鱼宠[穿书] Novel Summary One day, Li Yu transmigrat...
အကျော်ဇေယျ အရှင်သခင်၏ ဇနီး (Myanmar Translation)
933K 162K 171
The Legendary Master's Wife (Myanmar Translation) MM translate from English Translate Chapter (64- 201) (227-231) (381-399) Crd to original novel
I'maChef in the Modern Era [Myanmar Translation]
240K 62K 100
Name 我在现代做厨子[美食] Wǒ zài xiàndài zuò cr húzi [měishí] Author(s) 桃子苏 (Táozi sū) Translator(s) Exiled Rebels Scanlations Chapter 125chapters(118chapters+7extras) Status in COO Completed Myanmar Translation start date 6.4.2020
1.7M 124K 50
The Legendary Master's Wife MM Translation(အပိုင်း ၁ - အပိုင်း ၆၃)
673K 105K 64
传说之主的夫人 by 尹琊 Chuanshuo Zhi Zhu De Furen by Yin Ya Genres: Action, Adventure, Fantasy, Comedy, Historical, Martial Art, Romance, WuxiaWorld, BL (Chapter 1 - 63) Mature Content 🔞 Zawgyi Unicode2ver available All credit to Author & Translater
636K 108K 107
ကျန်းရှန်က အဆောက်အဉီးအမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ် သူ့ကိုယ်သူသေမယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ တကယ်တမ်းသူ့ဂိဉာဉ်က တခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို အချိန်ခရီးထွက်သွားတယ်။ ဒီထပ်ပိုပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာက သူက ကလေးမွေးဖွားရမဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ထဲ ရောက်သွားတာပဲ.... "သောက်ကျိုးနဲ.. ငါ့လာနောက်နေတာလား? ဒါက ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးလား ဘယ်လိုလုပ် ကိုယ်ဝန...
My Polaris (My Lovely Dom)
591K 46.9K 61
Sex or love?Just BDSM အစား ဤ fic အားအစားထိုးေရးသားသည္။ Both Unicode and Zawgyi Start Date :4July 2018
1.9M 309K 129
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းၿပီး ေသြးနားထင္ေရာက္ကာ ေအးစက္စက္ေနတတ္တဲ့ ေကာင္ေလးရယ္ သြက္သြက္လက္လက္ ထက္ထကျ္မက္ျမက္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရယ္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆံုေတြ႔ၾကတဲ့အခါ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမွာလဲ Author::Ju Mao Ge Ge original title:::Da Lao Dai Qiu Pao ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးလ...
373K 49.1K 50
လောကကြီးတစ်ခုလုံး ငါ့ကိုဟားတိုက်ပြီးလှောင်နေပါစေ... မင်းသာငါ့အနားရှိရင် ငါဘယ်အရာကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး... ~~~~~ 2020.12.11 2021.6.9
688K 48.5K 49
ငယ္ကတည္းက လိုခ်င္တာမရရေအာင္ ယူတတ္သူ မင္းဓန မိဘေတြဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ သနားစရာ သ်ွင္မင္းဆက္ကို ေမြးစားလိုက္တယ္ မင္းဓနကို ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ခ်င္လို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ အဓိပတိဘြားကို ခ်ည္းကပ္ရင္း တကယ္ခ်စ္မိသြားသူ သ်ွင္မင္း ႏွစ္ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ သ်ွင္မင္းဆက္ကို ခံစားခ်က္႐ွိလာတဲ့ မင္းဓန .. သ်ွင္မင္းအေၾကာင္း ဘာမွမသိပဲ တကယ္ခ်စ္သြား...
Swamping with Intimacy(Season-1)
2.6M 372K 77
Describing the love betweenasoft Doctor andacool Gangster . _____ သိပ်အားပြင်းလွန်းတဲ့ စိတ္တဇနာမ်တခုမှာ နစ်မြှုပ်ကြပြီဆိုသော်.... သိပ္အားျပင္းလြန္းတဲ့ စိတၱဇနာမ္တခုမွာ နစ္ျမႇုပ္ၾကၿပီဆိုေသာ္....
White in the red heart(ခိုနားခွင့်လေး )Complete
90.9K 8.4K 46
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကနှင်းသွေးရဲ့စိတ်ကူးယဥ်သိုင်းဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ..နှင်းသွေးရေးတဲ့သိုင်းစာစဥ်တွေထဲကပထမဆုံးboyloveတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ် ကောင်းကင်ဂိုဏ်းကသိုင်းနတ်ဘုရားလိုတင်စားခံရတဲ့ကောင်းကင်ဂိုဏ်းတပည့်ပိုင်ရှီးနဲ့ နတ်ဆိုးသွေးနှော ရှုပင်းခန့်တို့ကြားက ဇာတ်လမ်းလေးပါ ဒီဇာတ္လမ္းေလးကႏွင္းေသြးရဲ႕စိတ္ကူးယဥ္သိုင္းဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ...
3.6M 290K 87
(Unicode & Zawgyi) ပင်လယ်ဆိုသည်မှာ လေညင်းအောက်တွင် သာယာငြိမ့်ညောင်းစွာ လှုပ်ခတ်ရုံ လှုပ်ရှားပြီး ပြင်းထန်သော လေပြင်းအောက်တွင်မူ ဒေါသမာန်ကြီးစွာ ရုန်းကန်လာခဲ့မည်။ ခွန်းထက်ပိုင်သည်လည်း ပင်လယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေသည့် ဘဝပင်လယ်တွင် မုန်တိုင်းတစ်ခုရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုမုန်တိုင်းအမည်က ခွန်းဆက်ပိုင်။ ပင္လယ္ဆို...
I Am Your Baby's Father(ငါကမင်းကလေးရဲ့အဖေ/ငါကမင္းကေလးရဲ႕အေဖ)
4.6M 388K 40
🚨Complete🚨 ဤဇာတ်လမ်းသည်စာရေးသူ၏ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤဇာတ္လမ္းသည္စာေရးသူ၏ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။
Half Moon 🌗💫(Myanmar Translation)(Completed)
985K 62.1K 34
Author-메린 Translator-H_yee💫 ငယ်စဉ်တုံးက တောင်ပေါ်မီးလောင်မှုတခုကနေ ကယ်တင်ပေးခဲ့သူနဲ့ အရွယ်ရောက်လို့ အန္တရာယ်ထပ်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်း ကယ်တင်ပေးခဲ့သူ တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေသောအခါ...ထို့အပြင် ထိုသူကလူသားတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့အခါ....♥️